Kushanda kwesjhzs75-3e kongiri inosanganisa michina kuMyanmar vatengi kutakura ngarava | Shantui
Nguva yekuvaka: Gumiguru 2020
Yekushandisa munda (yeinjiniya mhando): kuvaka mumaguta
Musi waGumiguru 9, 2020, mushure memazuva mazhinji ekumisikidza kure uye nhungamiro, Shantui Janeoo Marine SjHZS75-3E kongiri yekusanganisa michina yakabudirira kupedzisa rinorema-basa kugadzirwa, kuvhura nzira yekugadzira kukosha kwevatengi veMyanmar.
Vakabatwa nedenda, Shantui Janeoo vashandi vebasa havana kukwanisa kuita pa-saiti kuisirwa nongedzo muMyanmar. Mushure mekunge mutengi abvuma kusarudza nhungamiro iri kure kuti ape yekutevera masevhisi. Nekuda kwekufambira mberi kunonoka kwekuvaka-saiti kuvaka uye kupindirana kwekumisikidza uye kugadzirisa, dhipatimendi rekutsigira sevhisi rakakunda matambudziko mazhinji uye nokushivirira rakapa nhungamiro kune vatengi pavanomiswa, uye nemoyo murefu uye zvine hungwaru vakapindura nhevedzano yezvinetso zvemakanika nedunhu zvakaonekwa pakuiswa kwe Vashandi veMyanmar muchimiro chemifananidzo. Mushure memwedzi ingangoita mina yekushanda nesimba, iyo yegungwa SjHZS75-3E kongiri yekusanganisa simiti yakazopedzisira yawana rinorema-basa kugadzirwa. Vatengi vanogutsikana zvakanyanya nemhedzisiro yemidziyo.
Mune inotevera nhanho, Shantui Janeoo achashandisa tekinoroji nyowani kugadzirisa nzira uye nzira dzekutungamira kure, kugadzirisa kugona kwekutungamira kure kune dzimwe nyika, uye kuona kuti zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinounzwa kune vatengi mune yakasarudzika fomu.